Data Journalism ဆိုတာ – Gniap
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ Data Scientist / Data Analyst ဆိုတဲ့ အမည်တွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပေမယ့် Data Journalist / Data Journalism ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့တော့ ထိတွေ့မှု နည်းပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါး မှာ Data Journalism ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုတာ မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပါ ။
Data Journalism ဆိုတာ ဘာလဲ?
ဒေတာအချက်အလက်တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ သတင်းစာရေးအတတ်ပညာ အမျိုးအစားတခုလို့ အလွယ်တကူ ပြောလိုက်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှင်းလင်းမယ် မထင်ဘူးဗျ။
“အချက်အလက်” ဆိုတာရယ် “သတင်းစာရေးအတတ်ပညာ” ဆိုတာရယ် စကားလုံး နှစ်ခု ကိုက ဒုက္ခအိုး ဆန်နေပါတယ်။ တချို့လူတွေက “အချက်အလက်” ဆိုတာကို များသောအားဖြင့် Spreadsheet တခုပေါ်မှာ တွေ့ရတဲ့ သင်္ချာဂဏန်းတွေ စုပေါင်းထားတဲ့ အစုအဝေးတခုခု လို့ ထင်ကြပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ တုန်းကတော့ ဂျာနယ်လစ်တွေ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အချက်အလက် ဆိုတာ ဒါမျိုး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယနေ့ ဒီဂျစ်တယ် ခေတ်မှာတော့ အရာရာတိုင်းနီးပါး ကို သင်္ချာဂဏာန်း နဲ့ ဖော်ပြနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်နေရပါတယ်။
သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၊ သူငယ်ချင်းအရေအတွက် တွေကိုလဲ ‘သုည’ နဲ့ ‘တစ်’ ဆိုတဲ့ သင်္ချာဂဏန်း နှစ်ခုထဲနဲ့ ဖော်ပြလို့ ရသလို လူသတ်မှု ၊ ရောဂါ ၊ မဲရလဒ် ၊ အကျင့်ပျက်ချစားမှု ၊ လိမ်ညာမှု – အစ ရှိတာတွေကလဲ အဆိုပါ ‘သုည’ နဲ့ ‘တစ်’ သင်္ချာဂဏန်း များသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို Data Journalism ဆိုတာ အခြားသော Journalism တွေနဲ့ ကွာခြားစေတာလဲ ?
ဂျာနယ်လစ်တယောက်က လုပ်ထုံးနည်းအရ သတင်းအနံ့ခံကောင်းသည့် အပြင် ဒီဂျစ်တယ်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ထပ်ပေါင်းပီး ပိုမို အားကောင်းတဲ့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်း ဖြစ်စေနိုင်တာကို Data Journalism လို့ ဆိုရပါမယ်။
နည်းပညာခေတ် ရဲ့ ဖြစ်နိုင်စွမ်းအားလုံးကို ဂျာနယ်လစ် ရဲ့ လုပ်ငန်းစဥ်ထဲကို ပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာ – အစိုးရ/ပြည်သူတွေဆီက သတင်းရယူမှုကို အလိုအလျောက် ဖြစ်အောင် Programming အသုံးချနိုင်တာမျိုး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် – Adrian Holovaty ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ChicagoCrime.org လိုမျိုးက ထင်ရှားတဲ့ သာဓက ဖြစ်ပါတယ်။
(စာရေးသူမှတ်ချက် – Andrian Holovaty ဆိုတာ Python Django Framework ကို ကူညီ ဖန်တီးခဲ့သူတဦး ဖြစ်ပြီး Journalism နယ်ပယ်မှာ Computer Programming အသုံးချနိုင်အောင် ဦးဆောင် လှုံ့ဆော်ခဲ့သူ တဦး ဖြစ်ပါတယ် ။ ChicagoCrime.org ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ် မှာ စတင်ခဲ့ပြီး ရည်ရွယ်ချက်က Chicago မြို့ ရဲ့ ရာဇဝတ်မှုအခြေအနေအားလုံးကို အများပြည်သူ သိရှိအောင် စုစည်းပေးနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Web Portal က 2007 ခုနှစ် မှာ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပီး EveryBlock ဆိုတဲ့ အခြားသော platform တခု အနေနဲ့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ https://data.cityofchicago.org ကို အစိုးရ ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပီး ရာဇဝတ်မှု အချက်အလက်များသာမက တမြို့လုံး ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို မည်သူမဆို ရယူနိုင်တဲ့ web portal မျိုး အခုချိန်ထိ ဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲပါ။)
ဒါ့အပြင် The Telegraph က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပါလီမန်အမတ်တွေရဲ့ အသုံးစရိတ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Data Story မျိုးဟာဆိုရင်လဲ ရာ၊ထောင်ချီနေတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကြားက ဆက်စပ်မှုကို နည်းပညာအသုံးချနိုင်ခဲ့တဲ့ Data Journalism ဥပမာ တစ်ခုပါပဲ။
MPs’ Expenses Data Story
Data Journalism က ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ ?
ဒီမေးခွန်း ကို Data Journalism လောက မှ ထင်ရှားသူတို့၏ အနှစ်သက်ဆုံးသော သတင်းများအကြောင်း ဥပမာပြုပြီး ဖြေဆိုသွားပါမယ်။
“Do No Harm in the Las Vegas Sun”
La Nación (Argentina) မှ Angélica Peralta Ramos ရဲ့ ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
အဖြေ : ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးဥပမာ ကတော့ Las Vegas Sun ရဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ထုတ် ဆေးရုံတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအကြောင်း Do No Harm series ပါ။ The Sun အနေနဲ့ ဆေးရုံမှတ်တမ်းပေါင်း ၂.၉ သန်းကျော် ကို စီစစ်သုံးသပ်ခဲ့ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သည့် ထိခိုက်မှုများ၊ကူးစက်မှုများ နှင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုအမှားပေါင်း ၃၆၀၀ ကျော် ကို ထုတ်နုတ် သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် The Sun အနေနဲ့ လူထုမှတ်တမ်း မှတ်ချက်များမှလဲ ဒေတာများ ရရှိခဲ့ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်သင့်ပါလျက်နဲ့ လူနာ အသက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော် ကို ထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ The Sun ရဲ့ ထုတ်ဖော်ပြသမှုတွေထဲမှာ စာဖတ်သူ အနေနဲ့ မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမိုခဲ့သည့် ခွဲစိတ်မှု မတော်တဆဖြစ်ရပ်များ ကို ဆေးရုံအလိုက် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည့် Interactive Graph ၊ ဆေးရုံတစ်ခု မှ တစ်ခု ကူးစက်ရောဂါပြန့်ပွားမှု ကို ပြသသည့် အချိန်ဇယား မြေပုံ Timeline map နှင့် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သင့်တဲ့ မတော်တဆဖြစ်ရပ်များဖြင့်သော်လည်းကောင်း (သို့) လူများကို ထိခိုက်နစ်နာစေခဲ့သည့် ဆေးရုံများဖြင့်လည်းကောင်း sorting ရွေးချယ်နိုင်သည့် Interactive Graph အစရှိသည်များ ပါဝင်ပါသည်။ ကျွန်တော် ဒီပရောဂျက်ကို ကြိုက်နှစ်သက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက နားလည်ရလွယ်ပြီး ရှာဖွေရလဲ လွယ်ကူလို့ပါ ။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် လွယ်လင့်တကူ ဒေတာများကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
ဒီ ပရောဂျက်မှာ ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့ပါတယ်။ Nevada ပြည်နယ်အစိုးရ နဲ့ လွှတ်တော်ပိုင်းမှာ ကျန်းမာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု နဲ့ ပတ်သတ်ပီး ဆွေးနွေးမှုများ ရှိလာခဲ့သလို ဂျာနယ်လစ်များအနေနဲ့လဲ ဒေတာအချက်အလက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန် လာစေဖို့ အားကုန်ကြိုးစားလာကြပါတယ်။
The Data Journalism Handbook by Liliana Bounegru, Lucy Chambers, Jonathan Gray ( https://www.oreilly.com/library/view/the-data-journalism/9781449330057/ch01.html
အခြားသော ဂျာနယ်လစ်များ ၏ ရွေးချယ်မှု သတင်းဆောင်းပါး ပရောဂျက်များအကြောင်းကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာ ။
Tags: Data JournalismOreilly